Live On (2020) – Channel Myanmar Share
Original name 라이브온
Synopsis of Live On (2020)
High School Romance Drama ဖနျတှအေတှကျ ကားသဈလေး
Baek Ho Rang ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးဟာ လှပခြောမောတဲ့အသှငျအပွငျကွောငျ့ ကြောငျးမှာတငျမကဘဲ social media မှာပါ နာမညျကွီးသူလေး ပွီး ယောကျြားလေးတိုငျးရဲ့အသညျးစှဲပေါ့
နာမညျကွီးပမေယျ့ မာနကွီးတတျတဲ့စရိုကျကွောငျ့ ဘယျသူနဲ့မှအပေါငျးအသငျးမလုပျဘဲ တသီးတခွားတညျးနလေရှေိ့ပါတယျ
တဈရကျမှာ အှနျလိုငျးပျေါမှာထူးဆနျးတဲ့လူတဈယောကျပျေါလာပွီး Ho Rang ကိုအထိတျတလနျ့ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ အကွောငျးရငျးကတော့ ထိုသူဟာ Ho Rang ရဲ့ ဖုံးကှယျထားခငျြခဲ့တဲ့ အတိတျကလြှို့ဝှကျခကျြတှအေားလုံးကို သိရှိနတေဲ့သူဖွဈနလေို့ပါပဲ
ထိုသူကိုဖျောထုတျနိုငျဖို့အတှကျ ကြောငျးက broadcasting club ရဲ့ခေါငျးဆောငျ Go Eun Taekဆီကအကူအညီတောငျးဖို့လုပျရာက သူငယျခငျြးတှရေလာခဲ့ပါတော့တယျ
ဒီသူငယျခငျြးတှရေဲ့အကူအညီနဲ့ ထူးဆနျးတဲ့သူကို ဖျောထုတျနိုငျပါ့မလား…..အဲ့ဒီလူကရော ဘယျသူမြား….ဘယျလို loveline တှပေျေါလာဦးမလဲ….
ဒီဇာတျလမျးတှဲလေးဟာ အပိုငျး(၈)ပိုငျးပါဝငျပွီး တဈပတျကိုတဈပိုငျးနှုနျးနဲ့ အင်ျဂါနတေို့ငျးမှာထုတျလှငျ့ပွသသှားမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုပေးကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါရစေ….။
( အညှနျးရေးသားထားတာကတော့ Ei Phyu Khin ဖွဈပါတယျ )
High School Romance Drama ဖန်တွေအတွက် ကားသစ်လေး
Baek Ho Rang ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ လှပချောမောတဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့် ကျောင်းမှာတင်မကဘဲ social media မှာပါ နာမည်ကြီးသူလေး ပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်းရဲ့အသည်းစွဲပေါ့
နာမည်ကြီးပေမယ့် မာနကြီးတတ်တဲ့စရိုက်ကြောင့် ဘယ်သူနဲ့မှအပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘဲ တသီးတခြားတည်းနေလေ့ရှိပါတယ်
တစ်ရက်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီး Ho Rang ကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် အကြောင်းရင်းကတော့ ထိုသူဟာ Ho Rang ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားချင်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးကို သိရှိနေတဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါပဲ
ထိုသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျောင်းက broadcasting club ရဲ့ခေါင်းဆောင် Go Eun Taekဆီကအကူအညီတောင်းဖို့လုပ်ရာက သူငယ်ချင်းတွေရလာခဲ့ပါတော့တယ်
ဒီသူငယ်ချင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့သူကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါ့မလား…..အဲ့ဒီလူကရော ဘယ်သူများ….ဘယ်လို loveline တွေပေါ်လာဦးမလဲ….
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ အပိုင်း(၈)ပိုင်းပါဝင်ပြီး တစ်ပတ်ကိုတစ်ပိုင်းနှုန်းနဲ့ အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ….။
( အညွှန်းရေးသားထားတာကတော့ Ei Phyu Khin ဖြစ်ပါတယ် )
Original Network: jTBC, Naver TV Cast
Translated by Shoon Thu Thu Chain , Hnin Pale , Lwinlwin Aung , Ei Phyu Khin
Episode (1) [500 MB]
YoteShin / Gdrive / Usersdrive / Yandex / Megaup / Meganz / VIP Link
Episode (2) [540 MB]
Episode (3) [540 MB]
Episode (4) [540 MB]
YoteShin / Usersdrive / Yandex / Megaup / Meganz / VIP Link
Episode (5) [560 MB]
Episode (6) [570 MB]
Episode (7) [570 MB]
Episode (8) END [570 MB]
Zip File (1 to 8 END) [4.3 GB]
Firt air dateNov 17, 2020 -
Last air dateJan 5, 2021
Episode runtime60 mins min
Home PageLive On (2020)
History of Swear Words 2021
နှငျးနဂါးသိုငျး ( 2003 ) နှင်းနဂါးသိုင်း ( 2003 ) ( Completed )